Ogaden News Agency (ONA) – Faallo: Shidaalka Ogadenya, Itoobiya Soojeed kusoo saari waydaye, ma Riyo ayay kusoo saari!+Gabayga Dheef-Shidaal, By-Xaaji
Faallo: Shidaalka Ogadenya, Itoobiya Soojeed kusoo saari waydaye, ma Riyo ayay kusoo saari!+Gabayga Dheef-Shidaal, By-Xaaji
Waxaa caadi iska ah in baadilku u ekaado Daadxoorta isagoo bulaalaaya ood moodo inuuna waligii dhamaanayn. Waxaa kale oo caadi ah in xaqu yahay sida jawharta ama macdanta oo aan tiro badanyn hase ahaatee qiimaheedu aad u sarreeyo. Guumaystaha itoobiya oo waqtigan xaaliga ah jaahwareersan oo madaxa iskula jira sidii Ido jir ku hayo ayaa soo maray marxalad lagu tilmaami karo i arkaay iyo hanjabaad joogta ah oo ku wajahnayd ONLF iyo Taageerayaasheeda. Waxuu ku hadaaqi jiray afarta duurka ku jirta waan soo afjarayaa maadaama aanu naqaano sida loo jabhadeeyo oonu muddo dheer soo jabahadaynay. Markay sidaa lahaayeen waxaa laga joogaa 20 Sano Cimrigoodiina wuuba dhamaaday.
Xaqlayaasha ONLF oo si xawli ah usii xoogaysanaya ayaa sahay iyo wehel ka dhigtay Daacadnimo iyo isku tashi oo waqtigan la joogo dunida ku yaraaday. Waxay si wacan u fahmeen Xikmadda odhanaysa cidaan warankaagu galin weedhaadu magasho, Markay waayeen dariiq ka sahalan oo loo maro xoraynta Ogadenya waxay qaateen go’aan adag oo quus ku reebay cadowga laftiisa. Talisyada Itoobiya ayaa waxay isu dardaarmaan Riyo beenaad taasoo ah waxaanu soo saaraynaa shidaalka OGADEN iyagoo hadafkoodo yahay dhaqaale. Waxaa kale oy saxaafadda ku mashquuliyaan, waxaanu dhisaynaa jidkii laga dhoofin lahaa. Bal aan kasoo qaadno inayba ciidan ku wareejiyaan oy xoog ku afbaneeyaan Ceelasha Shidaalka, waxay su’aashu ka taagan tahay xagee la marin doonaa? Waxaa jirtay Qiso qabsatay Beel soomaaliyeed, taasoo ahayd in laga xaday Buun, haday odayaashii laahaa isu yimaadeen waxay is waydiiyeen, Buunkii qolada xadday xagay ku yeedhin doonaan? Aragtidayda ayaa ah way ogtahay Itoobiya inayna shidaal Ogadenya ka dhoofin karin ee waxay ku qarinaysaa fashilka miletari ee ay kala kulmeen ONLF.
Qoraalkan iyo Tixdan ayaa ah mid aan si wayn ugu garab istaagayo Bayaankii kasoo baxay Xafiiska ONLF 15-October kaasoo u muuqday digniin kama dambays ah oo loo gudbiyay shirkadaha u soo hanqal taagaya inay boobaan khayraadka rabi ugu deeqay Dalkeena. Rugta Warfaafinta ONLF ayaa marar badan cadaysay inaan qaaddo la dari doonin dheefta,shidaalka Ogadenya kahor intaan Xal waara laga gaadhin Qadiyadda Dalka. Danka kale- Ma la odhan karaa Ururka ONLF waa Falaadhii dili lahayd Taliska Kud&Qanje (Itoobiya). Jawaabtu waa HAA! sababtoo ah waxay Hurmuud utahay guud ahaamba Ururada ku kacsaan Taliska Adis Ababa. Waxaa kale oy la timid qaab dagaaleed casriyaysan oon horay loogu arag Urur kasoo horjeeda xukuumada Itoobiya, tasoo ah in lasoo afjaro isla markaana la fashiliyo siyaasadii Dibada ee Gumaystaha.
Si kastaba ha ahaatee waxaan Shahaado sharaf hawada u marinayaa Ciidamada ONLF oo ka dhigay Bakayle burkiisa kujira soo duulayaashii wayaanuhu hor boodayay. Waxaan sidoo kale u dirayaa Jabhadda iyo Shacabkeeda Geesiga ah Xikmadii Abwaanada ee ahayd-
Hadaynaan is taakuli tabar yeelan maynee – Uguntada cadawahoo isku tiirsanaadaa!
Intaan kujiray Diyaarinta Qoraalkan waxaa i gujisay Tixdan ee Dhageysi iyo Akhris wacan-
WAA DUHUR DHARAAREED, WAQTIGU WUUNA DHEERYAHAYE-
HADAL DHUMUC LEH BAAN, SOO WADAA OO DHAMAYSTIRANE-
DHUGUFYADII TIGREEGIYO, ILAA CHINE DHUQURJAALE-
SHIRKADAHA DHAMAANIYO, ILAA HINDIYA DHOORAYDA-
DHAMBAALKAYGA WAA INAY, WADA HELAAN OY DHADHAMIYANE-
TUUBOOYINKAA WADA DHEREREN, EE DHOOFKA LAGU KEENAY-
DHEEFTII SHIDAALKAY RABAAN, INAY KU DHUUQAANE-
SHACABKII DHIBUU KALA KULMOO, WUUNA DHAYGAGAYE-
TAARIIKHDU WAA DHAXAL, NINKII DHAB U OGAANOOWE-
AWOWYADEEN WACDARAHAY DHIGEEN, WAAD KA DHARAGTEENE
WIXII DHIIGLE WUU GARANAYAA, DHIILADAAN WADA’E-
DHEXDA DHUUJA CADOWGAAN RABAA, INAAN DHUFAANAAYE-
WAA INAAN DHUNKAAL IYO QASNAA, GEED DHARKAYNADA’E-
GUUTOOYIN WADA DHAARTAYBAA, NOO DHUFAYS GALAYE-
DHABARKAY KA JABIYEEN, WIXII XEELAD LOO DHIGAYE-
AYNU DHOWRRO XAAJADU KOBTAY, DHINACA SAARTAAYE!
Waxaa soo diyaariyay- Xaaji M/rashiid